Muzvare Khupe Vodoma Dzimwe Nhengo dzeStanding Komiti yeBato Ravo
Muzvare Thokozani Khupe neMuvhuro vakadoma dzimwe nhengo dzeNational Standing komiti mubato ravo kusanganisira munin’ina waVaMorgan Tsvangirai, VaManase Tsvangirai apo kunetsana muMDC kuri kuramba kuchienderera mberi.
Nhengo itsva dzakapinzwa mukomiti iyi dzakaziviswa nevave munyori mukuru muMDCT VaDouglas Mwonzora zvichitevera mutongo weSupreme Court pamusangano wakaitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House.
Mumwe wevakadomwa mukomiti iyi ndiVaManase Tsvangirai vanove munin’inina wevaimbova mutungamiri webato iri, VaMorgan Tsvangirai.
VaMwonzora vati vaona zvakakodzera kuti vadome vanhu ava zvichitevera kusawirirana kwavari kuita nevari kutungamira bato reMDC Alliance VaNelson Chamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatswayo, vati zvaitwa izvi mazadzadama hutsi hwefodya.
Zvichakadaro, Muzvare Khupe vati kubva ikozvino zvichienda mberi vachange vachiita basa ravo vari paMorgan Richard Tsvangirai House.
Muzvare Khupe vatiwo vachadzinga nhengo dzeparamende dzichange dzisingatevedzere zvinodiwa nebato ravo idzo dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance.
Asi veMDC Alliance vakatokwidza nyaya iyi kumatare vachiti bato raMuzvare Khupe harifanirwe kubvumidzwa kudzinga nhengo dzebato ravo muparamende.
Zvichakadai, VaMwonzora vati pari zvino vari kuita gadziriro dzekuita kongiresi yechimbichichimbi yekutsvaga achatsiva VaTsvangirai sezvakataurwa nedare reSupreme Court.
Kubva pakaturwa mutongo neSupreme Court wekuti VaChamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuve mutungamiri webato iri, muMDC maita kusawirirana kwakakomba vamwe vachiti vachazadzisa mutongo uyu vamwe vachiti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Kubva pakaturwa mutongo uyu, vechikwata chaMuzvare Khupe nechikwata chaVaChamisa vari kugara vachiendesana kumatare nenyaya dzakasiyana-siyana.